Chemotherapy FAQ in Nepali language
के हो किमोथेरापी ?
किमोथेरापी भनेको विशेष प्रकारको औषधि द्वारा क्यान्सरको उपचार गर्ने प्रकृया हो ।यसमा प्रयोग हुने औषधीहरुलाई किमोथेरापीका औषधी भन्दछन्।
किमोथेरापी कुन स्थितीको क्यान्सरमा प्रयोग हुन्छ?
किमोथेरापी क्यान्सरको प्रकृति हेरेर निर्धारण गरिन्छ।कुनै क्यान्सरहरुमा रोग भट्ना साथ किमोथेरापी प्रयोग गरिन्छ भने, अरु क्यान्सरहरुमा अपरेसन पछि, अथवा रेडियसन सँगै/ पछि दिइन्छ।
किमोथेरापी नलिँदा के हुन्छ?
तपाईको डाक्टरले किमोथेरापी चाहिन्छ भन्नु भएको छ भने किमोथेरापी लिनै पर्छ।लिनुभएन भने क्यान्सर फैलिदै गएर अरु समस्याहरु थपिन सक्छन् ।
किमोथेरापी लिनलाई अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्छ ?
यो कुरा किमोथेरापीको प्रकार र तपाईलाई चाहिने मात्रामा भर पर्छ ।बिहान आएर किमोथेरापी पाएर बेलुका घर फर्किने किमोथेरापीलाई ‘डे केयर किमोथेरापी’ भन्छन् भने भर्ना भएर लिने किमोथेरापीलाई ‘ईन-पेसेन्ट किमोथेरापी’ भन्दछन्।
किमोथेरापी कसरी दिइन्छ ?
किमोथेरापी कि त खाने गोली औषधि हुन्छ कि त रगतका नशाबाट दिइन्छ।ईन्जेक्सनबाट दिनु पर्ने खण्डमा वार्डमा नर्सले सुई लगाइदिनु हुन्छ, र त्यसबाट औषधि जान्छ ।
किमोथेरापीमा कतिवटा औषधी कहिले सम्म लिनु पर्दछ ?
औषधिहरु कतिवटा र कहिलेसम्म लिनु पर्दछ भन्ने कुरा आफ्नो डाक्टरलाई सोध्नुहोस् । कुनै किमोथेरापी केहि मिनेटमा सकिन्छन् भने कुनै किमोथेरापी ३-४ दिनसम्म चल्छन्।
किमोथेरापी त महँगो हुन्छ रे ?
होइन, सबै किमोथेरापीका औषधिहरु महँगा हुँदैनन्। केही महँगा औषधी पक्कै छन् तर कुन किमोथेरापीले सबै भन्दा फाइदा गर्छ त्यो बारेमा सल्लाह गरेर मात्र उपचार सुरु गरिन्छ ।
किमोथेरापी लगाउँदा प्रतिकुल असरहरु हुन्छ ?
हो, किमोथेरापीका कारण विभिन्न प्रतिकुल असरहरु देखिन सक्छन, तर यि असरहरु सबैलाई हुन्छ नै भन्ने चै होईन । तपाईको उमेर, तौल, पोषणले फरक पर्छ । आफुलाई हुन सक्ने असरका बारेमा डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्।
क्यान्सर रोगको उपचार
किमोथेरापीका प्रतिकुल असरहरु के के हुन् र कसरी सामना गर्ने ?
कमजोरी: किमोथेरापी पछि शरिरमा ताकत नभएको जस्तो, कमजोरी हुनु धेरै जनालाई हुन्छ।अलिअलि कशरत गर्नुहोस् , पोषिलो खाना खानुहोस् ।आफुजस्तै अरु विरामीहरुसँग कुरा गर्नुहोस् , चिन्ता नगर्नुहोस् , किमोथेरापी सकिए पछि ठिक हुन्छ ।
वाक्‌वाक् लाग्नु, उल्टी हुनु: किमोथेरापीको प्रकृति अनुसार कसैकसैलाई वाक्‌वाक् लाग्ने, उल्टि हुने हुन सक्छ । यसलाई रोक्ने औषधि किमोथेरापी दिनु अघि नै दिइन्छ ।
पखाला लाग्नु: कुनै कुनै किमोथेरापीले पखाला लाग्छ । जिवनजल र झोल पदार्थ प्रशस्त पिउनुहोस् धेरै भयो भने तुरुन्त अस्पताल आउनुहोला।
खाना खान मन नलाग्नु: किमोथेरापी लिइसके पछि खानेकुरा खान रुचि हराउन सक्छ । त्यसो भयो भने थोरै थोरै गरेर पटक पटक खानुहोस् , हल्का फुल्का खाने गर्नुहोस् , चिन्ता नगर्नुहोस, किमोथेरापी सकिए पछि खानाको रुची बढेर आउँछ ।
दुख्‍नु: किमोथेरापीका कारण सुई लगाएको ठाँउमा दुख्‍नु, पुरै शरिरमा दुखेको जस्तो हुनु, झम्‌झम् हुनु किमोथेरापीका प्रतिकुल असरहरु हुन् । यस्तो भयो भने आफ्नो डाक्टरसँग भन्नुहोस्, औषधिले ठिक गर्छ।
ज्वरो आउनु:किमोथेरापीका कारण शरिरको रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमि आउन सक्छ, यस्तो भयो भने ज्वरो आउँछ ।किमोथेरापी लगाए पछि ज्वरो आयो भने तुरुन्त अस्पताल आउनु पर्छ।
रगतको कमी हुनु: किमोथेरापी लगाउनु अघि र लगाइसके पछि रगत जचाउनु पर्छ । किमोथेरापीले रगतको कमि गराउन सक्छ। रगतको कमी भएको खण्डमा रगत चढाउनु पर्न सक्छ ।
छालामा समस्या:किमोथेरापी लगाउन सुई लगाएको ठाँउमा दागहरु देखिन सक्छन् , किमोथेरापी लगाएको रगतको नशा सुक्न सक्छ ।छाला सुख्खा हुन सक्छ, त्यसका लागी सामान्य क्रिम लगाउनुहोस् ।
यौन / प्रजनन:किमोथेरापीका कारण कसैकसैलाई यौन चाहना घटेर जान्छ , महिलाहरुको योनी सुख्खा भएर समस्या आउन सक्छ ।अर्को कुरा के याद गर्नु पर्छ भने क्यान्सर सर्ने रोग होइन र यो सबै लक्षणहरु अस्थायी हुन् ।केहि किमोथेरापीका औषधीले महिला र पुरुषको प्रजनन शक्ति घटेर जान्छ, जुन स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छ ।
कपाल झर्नु:किमोथेरापी पाइरहेकाहरु मध्य कसैकसैको कपाल झर्न सक्छ । कसैको कपाल पातलो भएर जान्छ भने कसैको सबै कपाल झर्छ ।किमोथेरापी सकिए पछि धेरै जसोको कपाल फेरी पलाउँछ । त्यसैले टोपी लगाउनुहोस् , सामान्य स्याम्पु प्रयोग गर्नुहोस् , अनि नरम ब्रशले कपाल कोर्नुहोस्
रेडियोथेरापी बारे जानकारी
किमोथेरापी र रेडियोथेरापी गराउने बिरामीको लागी पौष्टिक खानेकुराको जानकार
दैनिक ३ छाक भोजनको साटो ७-८ वटा साना साना भोजनहरू गर्नुहोस् ।
दिन भरमा २-३ लिटर झोल कुरा पिउनुहोस्, जस्तै पानी, दाल, दुध, नरिवल पानी, जिवनजल, आदि।
खाना चपाउन वा निल्न गाह्रो हुन्छ भने खानालाई धेरै बेर पकाएर गिलो बनाएर, चिसो बनाएर खानुहोस् ।
मुखमा घाउहरू आएको छ भने धेरै अमिलो, पिरो वा मसला भएको खानेकुरा नखानुहोस् ।
पोषणको लागी प्रोटिन पाउडर पिउनु पर्ने भए पाउडरलाई दूध वा पानीमा घोलेर खालि पेटमा पिउनुहोला ।
सडक छेउमा पाइने खानेकुरा, राम्रो सँग नपकाएको खानेकुराबाट पेटको सङ्क्रमण हुन सक्छ, नखानुहोला ।
कुनै पनि अन्य जानकारी चाहिए सधैं उपलब्ध हुने डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीसँग कुरा गर्नुहोला। यहाँको उपचार सहज गराउन हामी तत्पर छौं ।
Website was made with Mobirise site themes